Indlu yasefama kaFranca
Indawo yam yokuhlala ifanelekile izibini, iintsapho (kunye nabantwana) kunye namaqela amakhulu.
Indlu ifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe ngoko ke akukho ndawo zinqatshelwe zonke zifikeleleka uhamba ukusuka kwindlu ukuya egadini ukuya kwindawo yokuqubha kwindawo yokuzivocavoca kwiveranda ngaphandle kwengxaki. Awukwazi ukuzisa izilwanyana zasekhaya, izinja, iikati, njl .............
Indlu yam ibekwe emaphandleni avulekileyo, kwindawo ezolileyo, ejikelezwe yindalo kwaye apho unokuphumla khona, ukulibala uxinzelelo esiluqokelela yonke imihla. Ukwanalo nethuba lokonwabela ichibi lokuqubha elitofo-tofo apho unokugcakamela ilanga kwaye ubukele ipanorama emangalisayo.
Indlu ixhotyiswe ngocingo.
Mna umntu ukusebenzelana neendwendwe iminyaka eliqela kunye namava wam undifundise ukuba kube khona kakhulu kodwa ke iholide yakho / amava siphile ngokukhululekileyo kangangoko kunokwenzeka yaye kwangaxeshanye kufuneka bazi ukuba ndisoloko Mna ke ziyafumaneka kuyo nayiphi na imfuno okanye imfuneko ngalo naliphi na ixesha nangaliphi na ixesha.
Mna umntu ukusebenzelana neendwendwe iminyaka eliqela kunye namava wam undifundise ukuba kube khona kakhulu kodwa ke iholide yakho / amava siphile ngokukhululekileyo kangangoko kun…